घर मा पाइलेट्स, आफ्नो ख्याल गर्न कुनै बहाना छैन! | बेजिया
घर मा पाइलेट्स, आफ्नो ख्याल गर्न कुनै बहाना छैन!
पाउ Heidemeyer | | व्यायाम, स्वास्थ्य
यी महिनाहरूमा हामी बाँचिरहेका छौं संगरोध, सीमित र अब डे - वृद्धि, तिनीहरूले हामीलाई आफैलाई पुनर्जीवित गर्न र घर मा व्यायाम धेरै पटक आफ्नै देखभाल गर्न बनाएका छन्।
अब ग्रीष्म comingतु आउँदैछ, धेरै मानिससँग आफ्ना प्रियजनहरू, साथीभाइहरू र सहकर्मीहरूसँग धेरै समय बिताउने समय छ। काममा फर्कदा हामीबाट टाढा जान्छ र नियमितमा फर्किनु गाह्रो हुन सक्छ।
यस लेखमा हामी pilates कसरी गर्ने बारे कुरा गर्नेछौं घरमा एक प्रभावी, सरल र रमाईलो तरीकाले स्वस्थ रहन।
व्यायाम स्वस्थ रहनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र लामो समयको स्वास्थ्य समस्याहरूबाट बच्न, यदि तपाईंसँग समय छैन भने जिममा जानुहोस्, वा प्याडल टेनिस खेल्नुहोस् वा पौडी खेल्न जानुहोस्।
स्वस्थ जीवनशैलीको नेतृत्व लिन आवश्यक छ, केवल हाम्रो दैनिक तालिकामा व्यायाम मात्र समावेश गर्दैन तर स्वस्थ खाना पनि हो, संतृप्त फ्याट वा परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट बिना नै। हाम्रो दिनको फाइदा भनेको हाम्रो गतिविधिलाई नाप्ने अनुप्रयोगहरू हुनु हो, साथै घडीहरूको साथ तिनीहरूले खेलमा हाम्रो प्रतिक्रिया मापन। उपकरणहरू जसले हामीलाई हाम्रो विकास हेर्न मद्दत गर्दछ।
कैदमा रहेको बेला, यूट्यूब भिडियो र विभिन्न व्यायाम दिनचर्या "परिवार मध्ये एक" बनेको छ। त्यहाँ दर्जनौं अभ्यासहरू छन् जुन हामी मेशिनको आवाश्यकता बिना गर्न सक्दछौं, केवल हाम्रो शरीर र उपकरणहरूसँग जुन हामी घरमा छौं।
1 घरमा फिट हुनु मनोवृत्तिको कुरा हो
2 Pilates दर्शन
3 घरमा पाइलेट्स गर्नका लागि सुझावहरू
4 Pilates घरमा गर्न व्यायाम
5 अन्य व्यायामहरू जुन हामी घर छोडेर पनि गर्न सक्दछौं
घरमा फिट हुनु मनोवृत्तिको कुरा हो
हामीलाई थाहा छ कि दिनहुँ घरमा व्यायाम गर्ने इच्छा र शक्ति पत्ता लगाउन सजिलो छैन, किनकि आलस्यले हामीलाई अक्सर जित्न सक्छ। अरु के छ त, निश्चित प्रकारका व्यायामहरूका लागि उनीहरूसँग एक राम्रो प्रशिक्षकको साथ गर्नु राम्रो हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यदि हामीसँग अर्को विकल्प छैन भने त्यहाँ कुनै बहाना छैन। वास्तवमा, घरमा हुँदा हामी व्यायाम तालिका गर्न घरमा कुनै पनि खाली समयको फाइदा लिन सक्छौं।
सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दृष्टिकोण र घर मा व्यायाम गर्न शक्तिशक्ति हो। अर्को, हामी तपाईंलाई घरबारमा गर्न सक्ने उत्तम Pilates आन्दोलनहरू बताउँछौं।
यो हालसालैका सबै भन्दा लोकप्रिय अभ्यासहरूमा एक हो योग यो कुनै पनि उमेरमा गर्न सकिन्छ र यसका फाइदाहरू छन् न केवल तौल घटाउने, तर फिगरलाई आकार दिन र शरीरको आसन सुधार गर्नका लागि।
Pilates को बारेमा जान्नको लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा, विशेष गरी यदि तपाईं यो घरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने। यो प्रविधि जोसेफ हबर्टस पाइलेट्स द्वारा सिर्जना गरिएको हो, र यसको मुख्य उद्देश्य शल्यक्रिया वा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरिसके पछि, केही रोगहरू वा रोगविज्ञानबाट शरीरको पुन: स्थापना वा पुनर्स्थापना थियो।
पाइलेट्स दिमाग, सास र शान्तिसँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईं घरमा पाइलेट्स गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले निम्न दिमागमा राख्नु पर्छ:
सास हेर्नुहोस्। यस अवस्थामा, तपाईं सधैं आफ्नो नाक मार्फत सास लिनु पर्छ। जब हावा तपाईंको शरीरमा प्रवेश गर्दछ, तपाईं आफ्नो पेटको मांसपेशीहरूलाई तनावमा राख्नुहुन्छ। तपाईको व्यायाम तालिका भरमा प्रेरणा र निकासको तालको साथ राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
एकाग्रता। Pilates सांद्रता को समयमा महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं चुपचाप वा व्यायाम अनुसार पृष्ठभूमि संगीत संग हुनुपर्दछ, र एक आराम संग ताल संग आन्दोलनहरु अनुसरण गर्नुहोस्।
पेट र काठ क्षेत्रहरू। तिनीहरू पाइलेट्सका दुई आधारभूत स्तम्भहरू हुन्, तिनीहरू शक्तिको केन्द्र हुन्। यदि तपाईं ती क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त बल दिनुहुन्छ भने, तपाईंको शरीर सन्तुलित हुनेछ। त्यसकारण, तपाईंले मुद्रामा ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ।
अभ्यास तीव्रता मा परिवर्तन र तपाईं यो अभ्यास मा प्रगति रूपमा तपाईं एक उच्च स्तर मा अभ्यास नगरेसम्म तपाईं माथि जान सक्नुहुनेछ।
घरमा पाइलेट्स गर्नका लागि सुझावहरू
Pilates गर्न, तपाईंले समय सेट गर्नुपर्नेछ र व्यायामहरू हरेक दिन अभ्यास गर्नु पर्छ जस्तो तपाई जिममा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस समयमा प्रयास गर्नुहोस्, विचलित हुनबाट जोगिन घरमा कोही छैन। टिभी बन्द गर्नुहोस्, आवाज बिना फोन छोड्नुहोस् र व्यायामको आनन्द लिनको लागि आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले यो अभ्यास गर्नुभएन भने, हामी तपाईंलाई सोमबारदेखि शुक्रवार आधा घण्टा सुरु गर्न सल्लाह दिन्छौं र दिनचर्याको समयलाई अलि बढी बढाउनुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि Pilates बिस्तारै गरेको छ त्यसैले तपाईं आराम संग यो समय को लागी आवश्यक छ।
प्रत्येक सत्र सुरू गर्नु अघि, पाँच मिनेटको वार्म अप अघि गर्नुहोस्। तपाईंको खुट्टा सँगै उभिएर, कम्मरको पट्टि फर्कनुहोस्, पेटको सम्झौता गर्दा।
भुइँमा झुण्ड्नको लागि म्याट वा म्याट प्रयोग गर्नुहोस्। अन्य अभ्यासलाई फिटबल वा आधा क्षेत्र जस्ता सामग्रीहरू आवश्यक पर्दछ, जे होस्, तपाईंलाई सुरू गर्न आवश्यक पर्दैन।
राम्रो विचार प्राप्त गर्न तपाईं इन्टरनेट मा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो व्यायाम कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नका लागि।
यदि तपाईलाई शंका छ dतपाईले एक पेशेवर संग परामर्श गर्नुपर्छ भविष्यमा चोटपटकबाट बच्न।
Pilates घरमा गर्न व्यायाम
निम्न अभ्यासहरू शुरुआतीहरूको लागि वर्गीकृत गरिएको छ। यदि तपाईं पाइलेट्स अभ्यासको साथ सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो दिनचर्यामा ध्यान दिनुहोस् जुन हामीले प्रस्ताव गर्छौं:
तपाईंको खुट्टा सिधा साथ चटाई वा चटाईमा बस्नुहोस्, र आफ्नो हातले आफ्नो खुट्टा छुन कोशिस गर्नुहोस्। १ p सेकेन्डको लागि यो पोज होल्ड गर्नुहोस्, सुरूवातमा फर्कनुहोस्, र १० पटक दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईंको खुट्टा विस्तार गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई 90 them मा बढाउनुहोस्। तल्लो हातको पछाडि आन्दोलन जारी राख्नुहोस्, ट्रंक उठाउनुहोस् र खुट्टाले जमीनमा छुनुहोस्। त्यसो भए सुरूवातमा फर्कनुहोस्, पछाडिको मुद्रामा ध्यान दिनुहोस् र यो बिग्रन नदिन सावधान हुनुहोस्।
भुइँमा आफ्नो पछाडि सुत्न, तपाईंको पछाडि कडा। एउटा खुट्टालाई झुकाउनुहोस् जसले घुँडा टेक्ने छातीमा छुन्छ। अर्को खुट्टा सिधा हुनुपर्दछ, तर भुइँमा आराम गर्नु हुँदैन। तपाईको टाउको उठाउनुहोस्, १० सेकेन्डका लागि पोज समात्नुहोस् र १० पटक दोहोर्याउनुहोस्, त्यसपछि अर्को खुट्टामा स्विच गर्नुहोस्।
पछि आफ्नो घुँडामा तल झर्नुहोस्, बाँया खुट्टा को एकमात्र जमीन मा राख्नुहोस् र दायाँ हात र खुट्टा हावामा छोड्नुहोस्। तपाईंले केहि सेकेन्ड समात्नुपर्नेछ र तपाईंको दाहिने खुट्टाको समर्थनमा फर्कनुपर्नेछ। एक श्रृ both्खला दुबै खुट्टा, उही आन्दोलनको साथ गरेर पूरा हुन्छ। यो व्यायाम times पटक दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईंको खुट्टा उठाउनुहोस्, छाती र टाउको एकै समयमा। तपाईंको पछाडि, तल्लो र ग्लुटे मांसपेशीहरूलाई मद्दत गर्नको लागि १ rep प्रतिनिधि गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यी पाइलेट व्यायामहरू गर्न, तपाईंलाई थप तत्वहरूको आवश्यक पर्दैन, र तपाईं यो घर छोडेर नगरीकन गर्न सक्नुहुनेछ, चोटपटका कारणले तपाईंको स्वास्थ्यलाई जोखिममा नपारिकन आकारमा आउन उत्तम तरीका हो।
अन्य व्यायामहरू जुन हामी घर छोडेर पनि गर्न सक्दछौं
तपाईंलाई थाहा छ, त्यहाँ धेरै व्यायामहरू छन् जुन हामी केवल जिममा मात्र गर्न सक्दैनौं, तर तिनीहरूलाई घरबाट पनि गर्छौं र यो त्यति नै फाइदाजनक छ यदि तपाईं तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा कसरी गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ भने। उदाहरणका लागि, नाच्नुहोस्, वा खेल्नुहोस् यदि तपाईंसँग बच्चाहरू छन् भने तपाईं चलिरहनुहुन्छ र यति लामो समय सम्म बस्नुहुन्न।
यस अर्थमा, दुबै पाइलेट्स र योग एकदम राम्रा विकल्पहरू हुन् जसले हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अनुकूल गर्दछन्।
यो व्यायाम र स्वस्थ आहार कायम राख्नको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर नबिर्सनुहोस्, जसले तपाईंलाई तपाईंको शरीरको लागि आवश्यक पोषकहरू प्रदान गर्दछ। पोषण सँधै सबै भन्दा राम्रो पूरक हुनेछ तपाईंको फिगर र तपाईंको स्वास्थ्य दुबैको ख्याल राख्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » घर मा पाइलेट्स, आफ्नो ख्याल गर्न कुनै बहाना छैन!
तपाईंको छालाको लागि कफी साबुनको गुणहरू